युरोपेली आकाशमाथिको उडानमा अझै किन प्रतिबन्ध ? | Ekhabar Nepal
युरोपेली आकाशमाथिको उडानमा अझै किन प्रतिबन्ध ?
राजनीति साउन ३१ २०७६ ekhabarnepal
काठमाडौँ, साउन ३१ गते । सन् २०१३ को डिसेम्बरयता युरोपेली आकाश नेपाली वायुसेवा कम्पनीका लागि बिरानो बनेको छ । त्यसयता युरोपमै निर्मित दर्जनौँ जहाज खरिद गरेर नेपाली कम्पनीले उडान सेवा दिइरहे पनि युरोपेली आकाशमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा हुने विषय अझ अनिश्चित छ ।
अहिले आएर ईयूको मुख्य चासो भनेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायकका रूपमा अलग गर्ने भन्ने छ । त्यसको पनि कानुनी रूपमा प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । त्यसबाहेक खासगरी हेलिकप्टरको दुर्घटनाको विषयमा पनि ईयूले प्रश्न उठाइरहेको छ । यस विषयमा प्राधिकरणले हेलिकप्टर सञ्चालकलाई प्रस्ट रूपमा उडान सुरक्षामा सम्झौता नगर्न र त्यसो भए कडा कारबाही गर्छौं भनेर निर्देशन दिएका छौँ । त्यस्तै हेलिकप्टरको उडान सुरक्षाका विषयमा पनि मापदण्ड तयार भएको छ । हेलिकप्टर सञ्चालकले पनि यसमा सहयोग गर्छौं भन्नुभएको छ ।